Madaxweynaha Somalia oo markale ku baaqay nabad iyo joojinta dagaalka Kismaayo. – SBC
Madaxweynaha Somalia oo markale ku baaqay nabad iyo joojinta dagaalka Kismaayo.
Posted by Webmaster on June 10, 2013 Comments
Madaxweynaha oo warbaahinta maana Muqdisho kula hadlayey ayaa ka hadlay dagaalada Kismaayo oo uu yiri “ Waxaan ugu baaqayaa Odayaasha dhaqanka, aqoonyahanada, ururada bulshada iyo qeybaha kala duwan ee Kismaayo inay mas’uuliyad gaar ah iska saaraan joojinta dagaalada iyo collaadaha ka socda Kismaayo. Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Kismaayo ma aqbali karaan dagaalada oo sii socda oo shacabku wey ka daaleen dagaallo.
Madaxweyne Xasan Sheekh Ayaa hadalkan jeediyay xili maanta uu Qadasharaf Sagootin ah ugu sameeyay gudaha madaxtooyada Soomaaliya Xog hayihii hore Qaramada Midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Mr Agustine Mahiga
– DHAMAAD _